I-2019 #NABShow - Usuku lwe-2 Ukuxilonga - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » I-2019 NAB Bonisa » I-2019 #NABShow - Usuku lwe-2 ukuqopha
#GALSNGEAR LIVE! Buka ku- nabshow.com or broadcastbeat.com . @NABShow #NABShow
Sinesixuku esimangalisayo sesiboniso sethu sokuqala namuhla #GalsNGear's @brandbuzz kanye @adryenn ukubamba! #NABShow @NABShow - e-Las Vegas Convention Centre
Sawubona lapho! Siyakwamukela ku-DAY 2 we-2019 I-NAB Bonisa! Sisekugcineni - njengoba ungabona kusuka kuGumbi lokuLawula eligcwele, sifanele njengenhlambi futhi silungele ukuhamba! Sine-ALOT esitolo namhlanje, ngakho-ke hlala ungene ngemvume futhi ubone ukuthi i-Show Show inikeza ini! Sivakashele abantu abaningi abathakazelisayo izolo, futhi kukhona abantu abaningi abathandekayo ukubona namuhla! Ngakho hlala phansi, phumula, futhi masenze ukushayela! Ngabe lolo phondo engilizwayo? 🙂 Oh - kungumbukiso wethu wokuqala ngosuku!
Ukufunda ku-Senior Sales Specialist uKenki Arai, mayelana ne-cinema; I-Alexa, i-lenses, nokuthuthukiswa, ngakho-ke kuyesabeka!
Ifenisha yemboni ye-studio ye-professional ku @ @bbcconsoles ku @NABShow #NABShow
Labafana @tbcconsoles bayasiza kakhulu ngokuthola ifenisha yakho ye-studio ezingeni elilandelayo #NABShow
Lezi zibhebhe ku @tbcconsoles ziyizimbongolo ezimbi azikho enye indlela yokuyichaza! @NABShow #NABShow
Kufanele ukhulume noJohn Humphrey kusuka @HitachiGlobal namuhla! Usibonise imikhiqizo emisha epholile njenge-SK-HD1800, ikhamera encane ye-4K, nephaneli yokulawula yedijithali! #NABShow
Ngaphezulu kwesiteji sigma 😬 @Sigma_Photo @NABShow #NABShow
Ezingxenyeni ze-Flex Rental Rental ne-CEO uChristian Stein! Sithole leli thuba elimangalisayo lokufunda konke mayelana ne-Inventory; Ukuphathwa kwe-Warehouse, Izinhlelo zokusebenza ze-Mobile, ne-RDID 😎 Flex konke mayelana nokuskena kancane, nokwenza okuningi! I-Booth C11547 #NABShow @NABShow
Kusasa okusahlekisa nge-Ehro Field Solutions. Ukukhuluma noMchwepheshe Wezokuthengisa Okuphezulu, u-Elvis Luna mayelana neSisekelo Sokusekela iManfrotto, okuvumela ukuhlukahluka okuningi kokusetshenziswa nokuthuthukiswa! 😎 iBoth C11249 #NABShow @NABShow
Uzoxoxa [email protected] mayelana nemikhiqizo yabo entsha ye-2, umqapha wokuthinta isikrini we-702Touch! #NABShow
Uzoxoxa [email protected] mayelana nemikhiqizo yabo entsha ye-2, umqapha wokubuka isikrini we-Cine 7! #NABShow
Ukusakaza umhleli we-Beat Editor-in-Chief @ryansalazar uhlala ne-CEO [email protected] no-NAB Joint Board Chair, @CarolineBeasl15 ku-set #NABShow Live. #NABShow - e-Las Vegas Convention Centre
Okwamanje sixoxa noMn Kim Hutchinson, iMenenja ye-Akhawunti eNyakatho Melika, ngokuba Uhlobo. Izinto abanayo lapha ziyamangalisa nje! I-Booth C8215 #NABShow @NABShow
Ubuchwepheshe obunjalo obupholile abafaka ku @BroadcastDepot !! Bakhombisa isizukulwane esilandelayo sokuskena ubuchwepheshe ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Sodyo. #NABShow @NABShow
Ukuqalisa ngaphezulu @SecureData @NABShow #NABShow
Imboni esabekayo ikhanya phezu kwe @Zylight @NABShow #NABShow
Ithimba lethu lixoxa no-Aaron Brady [email protected] mayelana nemishini [email protected] yefoni.
Ukhulume no @TVUNetworks mayelana ne-TVU yabo entsha entsha idlulisela i-4K / 60fps. Iyunithi yokudlulisa ephathekayo efaka i-60fps, isekela izimpendulo zamaselula, satellite, i-microwave, i-Ethernet, ne-WiFi. #NABShow @NABShow
Okwamanje uxoxa noMichael Accardi, uMongameli I-CueScript. Sifunda ngomthelela womkhiqizo wabo, futhi kunjalo ngamazwi embonini okuhlosiwe, futhi mayelana ne-SMTE 2110 Booth C2622 @CueScript_ #NABShow @NABShow
Sonke sihlelwe futhi silungele ingxoxo yethu elandelayo! SHURE I-Twin: I-Plex ayikwazi ukulinda ukushisa ekuseni yethu nge-Lavalier & Headset Microphones! #NABShow @NABShow
Umbuzo wethu manje ukhona noMphathi weMkhiqizo Omkhulu | Ukuphathwa KweMikhiqizo Yomhlaba Wonke SHURE I-Twin: Plex John Born, ohlanganyela nathi yonke imininingwane nazo zonke izimpendulo ofuna ukuzizwa! @ngemuva idokodo i-C6015 #NABShow @NABShow
Ukubambisana [email protected] mayelana namakhamera azo okusondeza ukusakazwa bukhoma! #NABShow @NABShow
Imishini emangalisayo e canare @NABShow #NABShow
Konke lokhu kuseveni yeselula yezindaba zokusakaza! @NABShow #NABShow
Ingxoxo enkulu mayelana nemikhiqizo emisha ngaphezulu ku- @litegear @NABShow
Ukukhuluma no @clearcomsystem mayelana nemikhiqizo yabo emisha njengezintambo zabo ze-LQ nama-FreeSpeak II ama-intercom systems!
Ukuhlelwa Kwemfashini Yomsebenzi LumaTchino iyamangalisa sonke! Bobabili uTerry Morgan Co-Founder, uMklami & Co-founder, uChristian Chris Demiris, usisitshele umkhiqizo wabo, sondla intshiseko yethu yokuhlelwa kweselula, nokusebenzisana. Awesome 👍 Booth C12438 #NABShow @NABShow
Abasebenzi bethu kufanele bakhulume [email protected] ngemikhiqizo yabo emisha, njenge-F-7H mk2, umshini wokukhanya we-7 "okhanyayo ngekhi lokuthinta ngaphambilini! #NABShow @NABShow
Ingxoxo enkulu nge @MultiDyne @NABShow #NABShow
Ithimba lethu linguSteven Holand, uMengameli we-MyCaseBuilder e-Booth C2056 futhi ujabule kakhulu ukuhlanganyela nathi konke mayelana noMsebenzisi wabo owenziwe ngokwezifiso zobuchwepheshe! Zonke ngokuphathelene nokufeza izidingo zethu zemishini! 😉kir #NABShow @NABShow
Ubuchwepheshe bekhamera yekhamera esabekayo ephezulu @NABShow #NABShow
Ukusakaza uBotha kuthatha amathrekhi ngosuku lwe-2 #NABShow. Sithole ithuba lokukhuluma ngokuqondile nesixuku ekuhambeni ukuze sikulethe ama-Momorail Moments.
Ngemuva kwezigcawu zamagatsha we-Broadcast Beat wefilimu #NABShow
"Asikho ukuncintisana ukuziqhayisa, siyancintisana ukubonisa amakhasimende ethu ukuthi sinakekela futhi siyabakhonza" uJoseph Maria Noriega kusuka @I-Fluotec Imikhiqizo yokukhanyisa ikhethwe kanjani kuMkhiqizo wonyaka ngu @NABShow. #NABShow
USihlalo weCooke Optics u-Les Zellan, ushaye izingqondo zethu ngomkhiqizo wazo omnandi. Baye bakhiqiza i-Metadata, ne-Frame Frame Senseorverage. Umgomo wabo wukuthi bahlangane nesidingo ngasinye semkhakha 😎 #NABShow @NABShow
Ukukhuluma @ @Dielectric_LLC ngomkhiqizo wabo omusha, i-RFHAWKEYE, uhlelo lokuqapha lomugqa wokudlulisa. #NABShow @NABShow
Kufanele uhlangane [email protected] osebenza ngokulandelela ikhamera. Babonisa umkhiqizo wabo omusha, Extreme, ibha yomkhamera omfushane. #NABShow @NABShow
Kanti futhi ithimba lethu linesikhathi esihle! Kulesi senzakalo e-SKAARHOJ ApS eBooth C1259 no-CEO uKasper Skaarhoj, befunda nge-Universal Broadcast Controllers. Kuze kube manje kuhle kakhulu #NABShow @NABShow
Uhlala phansi nomsunguli oyisisekelo @omniscientech ukukhuluma nge-tech
Ukuxoxa no @OutsightGlobal aka Cream Source, mayelana nomkhiqizo wabo omusha, i-SpaceX, okuyi-space LED ekhanyayo ngokukhanya okukhanyayo okujwayelekile! #NABShow @NABShow
Ibhetri iphakamisa ngaphezulu ku- @coreswx @NABShow #NABShow
I-FiLMiCInc I-Gold Standard ye-Mobile Video noMsunguli kanye ne-CEO Neill Barham noMphathi weMikhiqizo Elliot Fitzroy abasithakazelisayo ekuthuthukiseni kwabo kwamuva, naku-Recorder yabo ye-Standalone 😎 Booth C12439 #NABShow @NABShow
Thola ukuthi @neverno idinga kanjani ukuzibandakanya kwesikhathi sangempela usebenzisa ukubambisana kwezenhlalo nokunamandla kokusakazwa kanye nedijithali! #NABShow @NABShow
Ukulandelela nokugcina isihloko sakho ngephuzu [email protected] @NABShow #NABShow
Ithimba lethu liyakuthanda ku-OMNICHARGE eBooth C12139. Sikhuluma noStephen Neff, iMenenja ye-Akhawunti kaZwelonke ehamba nathi ngokusebenzisa amandla akhe amakhulu okuthakazelisa amandla. Isimemo sokuqeda umzabalazo wokushaja! Isiqubulo sabo "Amandla Anything, Anywhere! 😎 #NABShow @NABShow
I-tripod encane kakhulu ehlelwe emakethe @platypodtripods @NABShow #NABShow
Ithimba lethu lixoxa @Studio_Suite, isofthiwe yokuphatha studio ephethe yonke iphuzu lokuxhumana! #NABShow @NABShow
Abe Abt Izinhlelo ze-AJA Video ukhuluma noRyan Salazar mayelana no #NABShow. Woza uhlole idokodo labo elimnandi ehholo laseNingizimu elingaphansi!
Ama-gimbals okukhuluma no @netmediacorp777 @NABShow #NABShow
Ukuqondwa kwemboni ngaphezulu ku- @NABShow #NABShow
Nge-BirdDog, ngubani osamukela ezweni le-UN ngokusebenzisa isikhulu sabo sezokukhangisa u-Eamon Drew. Kusukela ku-2016 babe nomsebenzi owodwa ocacile: Ukuxazulula izinkinga zokuhamba komsebenzi, ngenkathi usindisa imali! Ukwandisa ububanzi bazo ukufaka i-4K Encorders & Decorders! 😎 #NABShow @NABShow
Njengoba i-DTC e-Booth C6934 ixoxa ngeJP Delport, i-Vice President, Ukuthengiswa kweDTC okusichaza ukuthi baye bathuthukisa kanjani ubuchwepheshe obunqenqemeni emakethe yokusakaza. Futhi ku-CineVue. I-AXIS SSK Sony I-4K UHD, i-HDR isisombululo sekhamera engenantambo ehlanganisiwe ngokugcwele.
I-Sam Wiles, Ikhamera Nomlingisi Wembala, isethulela ku-FilmConvert. Kuningi okumele ufunde mayelana nokufakwa kombala! Izinto ezihehayo ezithakazelisayo ngomkhiqizo wazo! I-Booth C3359 #NABShow @NABShow
Le ndawo enhle ukuba ibe khona! Sizihlambalaza nge-JVC ne-National Marketing Manager Professional Video Division Division Media Service Sector Craig Yanagi. Kathleen Inkulumo enhle mayelana ne-HEVC, amaKhamera, ukufaka ikhodi, nokusakazwa kokusakaza okungenantambo kir #NABShow @NABShow
Ukuzwa konke nge-Stable Force ku-PILOTFLY ne-Sales Manager, i-Ariel Chang. Ubani ohlanganyela nathi ukuthi ku-PILOTFLY konke kungenzeka, kuhlanganise nokwenza umehluko! Izesekeli zekhamera ezenziwe ukwenza ukudubula kokuhamba kungenzeka, futhi kusabeka! #NABShow @NABShow
Njengoba bethi embonini yefilimu - CUT! Phrinta !!! Lokhu ukugoqa, wonke umuntu ... Usuku lwe-2 lusemthethweni "emanzini," okusho! Futhi, kufanele ngikunikeze abasebenzi bethu abazinikezele ... futhi baphinde benza okungaphezu kwalokho engikulindele! Yiqiniso, akekho okwakungenzeka uma kungenjalo kuwe, Abathandi be-NAB abaqotho abaya kwiThe Show futhi benze konke lokhu kwenzeke! Ngakho, njengoba ngishilo izolo, MANJE yisikhathi sokuba wonke umuntu athathe amaqembu nezinye izenzakalo zomphakathi - useVEGAS! Yiba nesikhathi esikhulu! Sizobuyela emuva kusasa nge-MORE 2019 I-NAB Bonisa ukuhlanganisa! Kuze kube yileso sikhathi - hlala ungene ngemvume!
2019 I-2019 NAB I-2019 NAB Bonisa I-2019 NAB Bonisa iNkomfa 2019 NAB Bonisa amaqembu I-2019 NAB Bonisa uhlu lweqembu I-2019 NAB Bonisa amaqembu weqembu Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza H264 / H265 HDR I-HDR / i-WCG HEVC HEVC / AVC Immersive i-isovideo I-JCT-VC I-NAB Bonisa imisebenzi ye-nab show I-NAB Bonisa Las Vegas I-NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB2019 nabshow I-National Association of Broadcast Show Show ukunciphisa komsindo UHD / 4K / HD	2019-04-09
Ngaphambilini: I-Vislink Technologies ne-Grass Valley Yandisa Ubumbano Esikhathini se-4K
Olandelayo: I-MTI Film kuya kuDemo entsha Ithuluzi Lokususa Ukudotshwa kwe-DRS ™ i-NOVA ku-NAB